Tuesday January 03, 2017 - 19:23:25 in Wararka by Super Admin
Weerarka oo ay fuliyeen maleeshiyaad shiica ah oo iiraan ay maalgeliso waxaa lala beegsaday saldhigga jow oo dhaca koonfurta wadanka baxreyn sida ay sheegeen maamulayaasha wadankaasi.
Ugu yaraan hal askari ayaa weerarka ku dhintay sedax kalane waa ay dhaawacmeen iyadoona kooxihii weerarka gaystay ay ku guuleysteen in xabsiga ay kala baxaan dhammaan maxaabiistii ku xirneed oo ku eedaysnaa dambiyada argagaxisada loogu yeero sida ay xaqiijisay wasaarada arrimaha gudaha.
Telefeshinka Ahlubeyt oo kuyaal magaalada Karbalaa ayaa bogaadiyay weerarka isagoo sheegay in weerarku najaxay waxaana telefeshinka maalgelisa xukuuumadda shiicad iraan
Wasaarada arrimaha gudaha xukuumada Baxrayn ayaa sheegtay in weerarkan ay soo abaabushay xukuumadda iiraan oo ay sheegtay in ay taageerayso wax ay ugu yeertay argagaxiso sida lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee wasaarradu ku leedahay barta twitterka.
xukuumadda dabadhilifka Kuwait ayaa durbadiiba weerarkan si kulul u cambaaraysay waxayna ku tilmaamtay weerar halis ah oo ka dhan ah amniga qaranka dowladaha carabta.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in kooxaha shiicada ee Xabsiga Weeraray ay xoog ku furteen dhammaantii maxaabiistii ku xirneed oo cadadkooda lagu sheegay tobanaan.
Nidaamka Suniga Baxreyn ayaa kacdoon kala kulmaya dadka shiicada gaar ahaan Axzaabta siyaasadda oo taageera siyaasadeed iyo mid warbaahineed ka helaya Xukuumadda Tahran.
Sanaddii 2015 ayay Xukuumadda Manama wajahday kacdoon rabshado watay iyadoona falalkaasi qarbudaadda ah ku eedaysay dowladda Iiraan.